कमालको कपाल | Nagarik News - Nepal Republic Media
३० जेष्ठ २०७५ २७ मिनेट पाठ
बालाजु बस्ने सोहित बस्नेतको टाउकोमा कपाल उम्रिन छाडेको ५ वर्षजति भयो । ३० वर्षका उनी २५ वर्षको उमेरदेखि नै टाउकोमा तालु टल्काउँदै हिँड्न बाध्य भएका थिए । उनले भने, ‘पहिले त कपाल राम्रै थियो तर बिस्तारैबिस्तारै झर्दै टुक्रिँदै गयो र तालु टल्किन थाल्यो ।’ तालुभन्दा तल भने कपाल पहिलेजस्तै छ । सोहितले लामो सास तान्दै भने, तीस वर्षको भइसकेँ, अहिलेसम्म बिहे गरेको छैन, कपाल झरेर बुढो मानिसजस्तो देखिन थालिसक्यो, कसले पो छोरी देला र अब ।
ललितपुर भनिमण्डल बस्ने राम श्रेष्ठको पनि तालुको कपालले साथ छोडेको १० वर्षजति भयो । उनले भने, ‘सुरुमा तालुको कपाल झर्दा त, मेरो सर्वस्व नै स्वाहा भएको फिल भएको थियो, सार्वजनिक कार्यक्रममा जाँदा पनि सबैले मेरै तालु हेरेको फिल हुन्थ्यो र कति समय त अफिसमा बिदै लिएर घरबाट निस्किन,’ उनले थपे, जाडो महिना लाग्दा भने रमाइलै लाग्थ्यो, किनभने टोपीले तालु छोप्न पाइन्थ्यो तर गर्मी महिनामा भने निकै गाह्रो हुन्थ्यो ।’ अहिले भने उनले तालु मात्रै होइन, सबै कपाललाई बाईबाई गरिदिएका छन् । पूरै तक्लु बनाएपछि मानिसहरुले, विशेष गरेर महिलाले पहिलेजस्तो आँखा गाडेर तालु हेर्न छाडेको उनको अनुभव छ ।
सूर्यविनायक बस्ने ललिता शाख्वाको भने कपाल राम्रो पलाउँदै पलाएन । उनले दुःखेसो पोख्दै भनिन्, अरू साथीहरुको कपाल कस्तो सर्लक्क परेको, बाँधे पनि, छाडे पनि सुहाउने खालको छ तर मेरो कपाल भने फुलेको बन्सो जस्तो भयो । काटे पनि सुहाउँदैन, बाँधे पनि पातलो भएकाले नराम्रो देखिन्छ, छाड्यो भने त झनै सुकाउन राखेको गुन्द्रुकजस्तो पो हुन्छ त । उनले दुःखी हुँदै थपिन्, यदि भगवान् आएर तँ के बरदान माग्छस्, भन्यो भने म त मलाई सबै साथीहरुको भन्दा राम्रो कपाल बनाइदेऊ भगवान् भन्थेँ ।
माथिका तिनै जनाको समस्या कपालले साथ नदिँदाको हो । कपालले मानिसलाई सुन्दर देखाउँछ, बनाउँछ । यही कारण पनि हामी कपालको स्याहार सुसारमा अघि सर्ने गर्छौँ । कपालले सुन्दरतामा यति ठूलो भूमिका खेलेको हुन्छ कि केही मानिसहरु त सुन्दर देखिनका लागि विग अर्थात् नक्कली कपालको समेत सहारा लिन्छन् ।
त्यस्ता नक्कली कपाल धारीमा सर्वसाधारण मानिसभन्दा कलाकारहरु बढी देखिन्छन् । उदाहरणमा हामी केही नेपाली कलाकारलाई लिन सक्छौं । जसले राम्रो देखिनका लागि नक्कली कपालको सहारा लिए । त्यसमा केही कलाकारले रहरले नक्कली कपालको प्रयोग गरेका छन् भने केहीले बाध्यताले । नक्कली कपालको प्रयोग गर्नेमध्ये पनि केहीले भने अहिलेसम्म आफ्नो नक्कली कपालको राज लुकाएर राखेका छन्, सार्वजनिक हुन दिएका छैनन् ।
नक्कली कपालधारी कलाकारहरु
सुन्दर देखिनु सबैको चाहना हो, त्यसमा पनि कलाकारहरुका लागि त सुन्दर देखिनु चाहना मात्रै होइन, बाध्यता पनि हो । जुन चाहना र बाध्यता दुवैको चपेटामा परेकी एक नायिका हुन्, करिश्मा मानन्धर । अभिनेत्री करिश्मा मानन्धर सुन्दर नायिकाको रूपमा परिचित छिन् । यही कारण पनि उनी सुन्दरताका लागि जति पनि पैसा खर्च गर्न अघि सर्छिन् । दुई वर्षअघि मात्रै उनले नक्कली कपालका लागि डेढ लाख रुपैयाँ खर्च गरिन् जसले निकै चर्चा पायो । उनले आफ्नो सक्कली कपालमा नक्कली कर्ली कपाल जोडेकी थिइन्, जसको मूल्य मात्रै डेढ लाख पर्न आउँछ । उनको त्यस कपालको आयु एक वर्षको थियो । २०१६ को दुबईमा सम्पन्न नेफ्टा अवार्डका लागि उनले त्यति महँगो कर्ली कपाल जोडेकी थिइन् । पछिपछि पनि कहिले थाइकट स्टाइलको त कहिले स्टेट स्टाइलको नक्कली कपाल जोडेर उनी चर्चामा आइरहन्छिन्
त्यस्तै अहिले आमा बन्न लागेकी अभिनेत्री निशा अधिकारीले पनि नक्कली कपालको प्रयोग गर्थिन् । केही वर्षअघि मात्रै उनले पूरै कपाल खौरिएपछि उनको कपाल उम्रन समय लागेको थियो । त्यस समयमा उनलाई नक्कली कपालको सहारा लिन परेको थियो । निशाले रहरले नभई बाध्यताले नक्कली कपालको प्रयोग गरिरहेकी थिइन् । निशाले आफ्नो मनले चाहेको कुरा गनुपर्छ भन्दै सन् २०१५ को असारमा पूरै कपाल मुण्डन गरेकी थिइन् ।
बिहे हुनुभन्दा अघि सबैको ढुकढुकी बनेका अभिनेता आर्यन सिग्देलको अभिनयभन्दा पनि रूपको चर्चा बढी चल्छ । उनलाई ह्याण्डसम भएकै कारण सिनेमामा यति धेरै सफलता पाएको भन्नेहरु पनि धेरै छन् । तर उनलाई आकर्षक बनाउनमा नक्कली कपाल अर्थात् विगले ठूलो भूमिका खेलेको छ । आर्यनको सबैले फिल्ममा देखेको कपाल सक्कली हैन । उनले सुरुवातदेखि नै नक्कली कपालको सहारा लिएर स्टाइलिस बन्ने प्रयास गरिरहेका थिए । उनले आफ्नो सक्कली कपाल कस्तो छ अहिलेसम्म पनि सार्वजनिक गरेका छैनन् । फिल्ममा काम गर्दा होस् वा कुनै पनि कार्यक्रममा समावेश हुँदा आर्यन नक्कली कपाल नै प्रयोग गर्छन् । सक्कली कपाल उनको पहिलो सिनेमा किस्मत र होमवर्कमा देख्न पाइन्छ । ती सिनेमामा उनको खुलेको निधार स्पष्ट देख्न सकिन्छ । उनले सिनेमा फ्ल्यासब्याकमा नक्कली कपाल त लगाएका छैनन् तर सिनेमा अवधिभर टोपीको प्रयोग गरेका छन् ।
नक्कली कपालको प्रयोग गर्ने अर्का सेलिब्रेटी हुन् गायक हेमन्त शर्मा । उनले पनि राम्रो हेयर स्टाइलका लागि विगको प्रयोग गर्दै आएका छन् तर मानिसहरु उनको नक्कली कपाललाई सक्कली सम्झन्छन् । उनी सार्वजनिक कार्यक्रममा जाँदा सधैँ नक्कली कपालको प्रयोग गर्छन् । हेमन्तको सक्कली कपाल पनि अहिलेसम्म सार्वजनिक भएको छैन । उनलाई तपार्इंको कपाल नक्कली हो रेन्त ? भनेर मिडियाकर्मीहरुले सोध्दा रिसाउने गरेका खबरहरु पनि बेला बखतमा आउने गर्छन् । तर हेमन्तले नक्कली कपालबारे सार्वजनिकरूपमा भने स्वीकारेका छैनन् ।
जीवन लुईँटेलले पनि केही समय अघिसम्म विगको प्रयोग गर्थे । तर अहिले भने उनले सक्कली कपाल उमारिसकेका छन् । केही समययतादेखि उनलाई नक्कली कपालको आवश्यकता परेको छैन । तर उनी सिने यात्राका वर्षांैसम्म नक्कली कपालको सहाराले नै ह्यान्डसम देखिएका थिए । अहिले भने उनी सार्वजनिक कार्यक्रममा समेत सक्कली कपालमा जान्छन् । उनले कपाल उमारिसकेपछि सक्कली कपालमा राधा फिल्ममा काम गरेका छन् ।
सञ्चारकर्मी नरेश भट्टराईले पनि ह्यान्डसम देखिनकै लागि विग अर्थात् नक्कली कपालको सहारा लिने गर्छन् । उनलाई राम्रो आवाजका साथै ह्यान्डसम सञ्चारकर्मीको रूपमा लिइन्छ । यही कारण पनि उनलाई नक्कली कपालको आवश्यकता परेको हुन सक्छ । इमेज एफएममा कार्यरत नरेश विभिन्न स्टेज कार्यक्रमहरुमा समेत प्रस्तोता भएर काम गर्छन् । नक्कली कपाल नलगाउँदा भने उनी टोपीको प्रयोग गर्छन् ।
अभिनेता मुकेश ढकाल पनि नक्कली कपाल प्रयोग गर्ने कलाकारमा पर्छन् । उनले सिनेमा ‘प्लान’ र ‘पर्खिराख है’ मा नक्कली कपालको सहाराले ह्यान्डसम देखिने प्रयास गरेका थिए । त्यसो त मुकेश विनाकपाल ह्यान्डसम नदेखिने हैनन् । तर उनले आफ्नो लुक्सलाई अझै आकर्षक देखाउनका लागि नक्कली कपालको प्रयोग गरेका थिए । तर उनलाई नक्कली कपालमा सार्वजनिक कार्यक्रमहरुमा भने खासै देख्न पाइँदैन ।
गायक यशकुमारको कपाल पनि त्यति राम्रो र गुड लुकिङ छैन । यही कारण उनले सिनेमा ‘बाटो मुनिको फूल’मा नक्कली कपालको प्रयोग गरेका छन् । तर उनको त्यो नक्कली कपाललाई दर्शकले सिनेमाका लागि बढाएको भन्ने सम्झेका थिए । तर, साँचो कुरा त उनले सिनेमामा आकर्षक देखिनका लागि नक्कली कपाल प्रयोग गरेका थिए । वास्तविक जीवनमा यशकुमार टोपी र रुमालको सहायताले कपाल छोप्ने गर्छन् । उनी प्रायः स्टेज कार्यक्रमहरुमा रुमाल बाँधेर पुग्छन् ।
नक्कलीको ठाउँमा कपाल रोपाइँ
केही समयअघि नक्कली कपालको जमाना भए पनि अहिले भने नयाँनयाँ प्रविधिहरु आइसकेका छन् । तिनै प्रविधिहरुको सहयोगमा तक्लु भएकाको तालु पनि भरिपूर्ण हुन थालेका छन् । यसरी तालु रोपाइँमा पछिल्लो समय विकास भएको प्रविधिमा सर्जरीमार्फत रोपाइँ हुने भएपछि केही वर्षअघि भने विभिन्न हर्बल औषधिहरुको प्रयोग गरिन्थ्यो ।
हर्बल प्रयोग गरेर कपाल उमारेका सुजन अधिकारी मार्केटिङमा काम गर्छन् । जब दिन दुईगुना, रात चौगुनाका दरले उनको टाउकोदेखि कपाल बसाइ सर्न थाल्यो उनलाई निकै चिन्ता हुनथाल्यो । सुजनले भने, ‘मार्केटिङमा काम गर्नुपर्ने मानिस, पर्सनालिटी पनि चाहिने, तालुमा कपाल नभएपछि निकै समस्या भयो र जे पर्लापर्ला भनेर दबाइ खाएँ,’ उनले उत्साहित हुँदै भने, ‘दबाइ खान सुरु गरेको चार महिनामा त मेरो टाउको कालै भयो ।’ अहिले उनको कपाल राम्रै छ, सुजनलाई दबाइ लिँदा भनिएको रहेछ, यसले कपाल त अवश्य उम्रिन्छ तर केही नराम्रो असर पनि पर्न सक्छ । नराम्रा असरहरुमा, यौन शक्ति नष्ट हुनसक्ने भनिएको उनले बताए । तर, त्यस्तो नराम्रो असर नपरिकनै कपाल उम्रिएपछि भने उनी दंग छन् ।
बल्खुमा बस्ने श्याम गुप्ता हजाम हुन् । उनले महिनामा सय जति मानिसको कपाल काट्छन् । सबैको कपाल काट्ने गुप्ताको टाउकोमा भने कपाल थिएन । तीन वर्षअघि गर्मीको मौसममा तालुदेखि पसिना निकाल्दै कपाल काट्दै थिए, ती ग्राहकले साह्रै नराम्रोसँग उनको तालुको बेइज्जत गरे । त्यसपछि उनी एनी हाउ, तालुमा कपाल पलाउको सिद्धान्त लिएर अघि बढे । विभिन्न किसिमका तेलको प्रयोग गरे तर पनि कपाल पलाउन सकेन । त्यसरी नै दुई वर्ष बित्यो, यसबीचमा कपाल पनि रोप्न मिल्छ भनेको सुने र कपाल रोप्न हेयर ट्रान्सप्लान्ट सेन्टरमा पुगें र कपाल रोपेँ । अहिले उनको टाउकोमा करिब ७० हजार हाराहारीमा कपाल छन्।
स्वस्थ, सुन्दर कपाल महिला, पुरुष दुवैको सौन्दर्यताको पहिचान हो, त्यसमा पनि अझ बढी श्रेय महिलामा जान्छ । मानिसको सुन्दरतामा कपालले महŒवपूर्ण भूमिका खेलेको हुन्छ । तर, दुर्भाग्यवश कपाल झरेर रूप नै फरक भएकाहरुका लागि हेयर ट्रान्सप्लान्ट निकै राम्रो प्रविधि भएको बताउँछन्, छाला तथा सौन्दर्य विशेषज्ञ डा. धर्मेन्द्र कर्ण । उनले औषधि खाएर कपाल आउँछ भन्नेहरुदेखि सचेत रहन आग्रह गर्दै भने, ‘हामीले धेरै व्यक्तिहरु विशेषगरी पुरुषहरुमा यो समस्याले बढी सताउने गरेको देखेका छौं ।’ कपाल उमार्ने तथा झर्नबाट रोक्ने भन्दै भ्रमपूर्ण औषधि बेच्नेहरु पनि प्रशस्तै छन्, जसको विश्वास परी पैसा खर्च गरे पनि नतिजा शून्य हुन्छ । उनले थपे, ‘अब भने तपार्इं कपाल रोपेर यो समस्याबाट बाहिर आउन सक्नुहुन्छ ।’
कपाल प्रत्यारोपणको इतिहास
डा. कर्णका अनुसार विश्वमै पहिलोपटक सन् १९५० को दशकतिर अमेरिकास्थित न्यूयोर्कका ड्रमोलोजिस्ट नरम्यान ओरेन्टेरिकले टाउकोको पछाडिको भागबाट खालि भएको स्थानमा कपाल प्रत्यारोपण गर्ने कुराको प्रयोग गरे । उनले आफ्नो प्रयोगमा टाउकाको पछाडि भागबाट ग्राफ्ट निकालेर कपाल नभएको ठाउँमा रोप्दा त्यही प्रकारले नयाँ कपाल आएर बढे जसरी त्यो ग्राफ्ट आफ्नो असली ठाउँ बढ्थ्यो ।
त्यस्तै उनको सिद्धान्तलाई थप परिष्कृत गर्दै पि. ओनजरले सेफ डोनरबाट धेरै स्थायी कपाल निकाल्न सकिन्छ र त्यसलाई प्रत्यारोपण गर्न सकिन्छ भन्ने तथ्य अघि सारे । यसलाई सामान्य भाषामा भन्दा सेफ डोनर जोनबाट ट्रान्सप्लान्टेड भएका कपालको विशेषता भनेकोे आफ्नो असली ठाउँ (जुन टाउको पछाडि हुन्छ) त्यो ठाउँको कपालजस्तै हुन्छ । कहिल्यै झर्दैन ।
कसरी निकालिन्छ त कपाल ?
डोनर क्षेत्र अर्थात् टाउकोको पछाडि र दाह्रीबाट दुई विधिद्वारा कपाल निकाल्न सकिन्छ । यसका विभिन्न विधि छन् ।
जुन छालाको १० देखि १५ सेमी लामो र १ देखि १.५ सेमी चौडा हेयर फोलिसिससहितको स्ट्रीप टाउकोको पछाडिको भागबाट निकालिन्छ । जसले गर्दा टाउको पछाडिको भागमा लामो खत बस्छ । अब त्यो स्ट्रिपबाट खाली ठाउँमा प्रत्यारोपण गर्न एक–एक फोलोसिस छुट्टाइन्छ ।
फोलिक्युलर युनिट एक्स्ट्रयाक्सन विधिः
यो विधि विश्वमै आधुनिक तरिका हो । यसमा एक–एक फोलिसिस युनिट अथवा ग्राफ्टलाई निकालिन्छ । जुन घाउ एक दुई हप्तामा सञ्चो भएर जान्छ । यसरी निकाल्दा खत बस्दैन । यो प्रवधि अनुसार कपाललाई निकालेर स्टोर नगरी तुरुन्तै प्रत्यारोपण गरिन्छ । यसले गर्दा कपाल मर्ने सम्भावना कम हुन्छ र कपाल निकालेर स्टोर गर्दा ५ डिग्रीभन्दा कम तापक्रममा राख्नुपर्छ ।
कपाल प्रत्यारोपण गर्ने तरिका
कपाल प्रत्यारोपण गर्दा टाउकाको पछाडिपट्टिको भागको कपाल जसलाई ‘एन्ड्रोजेन इन सेन्सेटिभ एरिया’ भनिन्छ । त्यही भागको कपाल निकालेर कपाल झरेको भागमा एक–एकवटा ग्राफ्ट प्रत्यारोपण अर्थात् रोप्ने काम गरिन्छ ।
सर्जरीको माध्यमबाट कपाल प्रत्यारोपण गर्दा मानिसलाई बेहोस बनाउनु पर्दैन । कपाल निकाल्ने र प्रत्यारोपण गर्ने भागमा अस्थायी एनेस्थेसिया दिएर प्रत्यारोपण गर्न सकिन्छ । यसरी रोपेको कपाल २ देखि ३ हप्ता पछाडि झर्छ । तर १० देखि १६ हप्ताको बीचमा कपाल अझ बाक्लो भएर उम्रिन्छ । २ हजारवटा ग्राफ्ट कपाल प्रत्यारोपण गर्न ६ देखि ८ घण्टाको समय लाग्छ ।
प्रत्यारोपण गरिसकेपछि डोनर क्षेत्रलाई ब्यान्डेज र पेपरटेप प्रयोग गरेर छोपिन्छ ।
४८ देखि ७२ घण्टाभित्र निकालिन्छ । ब्यान्डेज निकाले पश्चात् त्यसमा एन्टिबायोटिक ओन्टिमेन्ट सात दिन लगाउनु पर्छ ।
कपाल रोपिएको क्षेत्रलाई भने खुला अथवा लोस क्यापले छोप्नु पर्छ । ताकि त्यस क्षेत्रमा कुनै संक्रमण नहोस् ।
ट्रान्सप्लान्ट गरिसकेको ७२ घण्टापछि क्लिनिकमै आएर बेबी स्याम्पूले सफा गरिन्छ ।
ट्रान्सप्लान्ट गरिसकेको १ वर्षसम्म एक प्रकारको औषधि प्रत्यारोपण गरिएको क्षेत्रमा लगाउन सुझाव दिइन्छ । जसले ट्रान्सप्लान्टेड कपालमा रक्त सञ्चार गर्न र कपाल छिटो बढ्न मद्दत गर्छ ।
प्रत्यारोपणपछि देखिने असरहरु
कुनै औषधिप्रति एलर्जी हुने, चिन्ता बढेजस्तो महसुस हुने, हल्का ब्लिडिङ हुने सामान्य समस्या देखा पर्छन् । शल्यक्रियापछि केही प्यासेन्टहरुमा डोनर क्षेत्रमा वा कपाल रोपिएको क्षेत्रमा दुखाई महसुस हुन सक्छ । जुन व्यक्तिपिच्छे फरक हुन सक्छ । केहीमा आँखा सुनिने हुन्छ, जुन एक हप्ता जतिमा हराएर जान्छ ।
प्रत्यारोपण गरिएको कपाल ४८ देखि ७२ घण्टापछि बढ्न सुरु हुन्छ । ५ महिनापछि कपाल कटाउन मिल्ने हुन्छ । करिब एक वर्षभित्र कपाल बाक्लो भएर आउँछ र मुन्डन गरे पनि फेरि कपाल पलाइरहन्छ । प्रत्यारोपण गरिएको कपाल एक दुई महिनामै झर्छ । र त्यही जराबाट नयाँ कपालहरु पलाउन थाल्छन् । तिन चार महिनाभित्र पूर्णरूपमा पलाउने गर्छ ।
कतिपयले यसरी कपाल रोप्दा दिमागलाई असर गर्छ भनेर अफवाह फैलाउने गरे तापनि त्यो सत्य नभएको कर्णको भनाइ छ । उनले भने, ‘दिमागमा यसको कुनै असर पर्दैन किनभने टाउकोमा पाँचवटा पत्र हुन्छन् ।’ सबैभन्दा माथिको छालामा कपाल हुने गर्छ । हाम्रो दिमागलाई यी पत्रहरुभन्दा तल रहेको स्कोल बोनले संरक्षण गरेको हुन्छ । कपाल प्रत्यारोपण चाहिँ छालामा गरिने भएकाले कुनै असर गर्दैन ।
कपाल प्रत्यारोपण गर्दा क्यान्सर हुने सम्भावना हुन्छ भन्ने भ्रम पनि पाइन्छ । जुन सत्य होइन । किनभने यो भनेको केबल एक ठाउँको कपाल अर्को ठाउँमा सार्ने मात्र हो । यो कुनै शरीरमा केमिकल मिलाउने अथवा क्यान्सर गराउने एजेन्ट मिलाउनु होइन ।
त्यसो त यदि तपार्इंलाई मधुमेह भएको छ भने कपाल रोप्न मिल्दैन । डा. कर्णले भने, ‘मधुमेह नियन्त्रणमा आएपछि मात्र कपाल प्रत्यारोपण गर्न सकिन्छ । कारण कपाल निकालेको ठाउँमा संक्रमण बढ्न सक्छ । त्यस्तै अरू कुनै समस्याले अप्रेसन थिएटरमा जाँदा कुनै कुराको एलर्जी छ भने नगराउँदा राम्रो हुन्छ । कुनै रोगका कारण कपाल झरेको छ भने त्यस्तो अवस्थामा पनि ट्रान्सप्लान्ट गर्नु हुँदैन ।
कपाल झर्नबाट रोक्न उपयोगी हुने ६ घरेलु चीज
१. सिमीः सिमीमा पर्याप्त मात्रामा फाइबर पाइन्छ । एक कप पाकेको सिमीको गेडामा १३ ग्रामसम्म फाइबर पाइन्छ । सिमीमा प्रोटिन पनि पाइन्छ जसले कपालको विकासमा सहयोग गर्छ ।
२. बदाम र काजुः बदाम र काजु जस्ता खानेकुरा पनि कपालका लागि निकै महत्वपूर्ण मानिन्छन् । बदाम र काजुमा हुने ओमेगा खनिज, सेलेनियम, जिंकजस्ता पदार्थ पाइन्छ जसले कपाललाई स्वस्थ र चम्किलो बनाउँछन् ।
३. सल्मोन माछाः सल्मोन माछामा पर्याप्त मात्रामा ओमेगा ३, भिटामिन बी १२ पाइन्छ, जसले कपाललाई बलियो बनाउँछ । ओमेगा र भिटामिन १२ को कमीले कपाल रुखो बन्छ ।
४. गाजर: गाजरले कपालको प्राकृतिक कन्डिसनिङ गर्छ । यसका साथै गाजरमा भिटामिन ए पनि पर्याप्त मात्रामा पाइन्छ ।
५. हरियो सागसब्जीः हरियो सागसब्जीमा आइरन, भिटामिन्स, क्याल्सियम पाइन्छ, कपालको वृद्धिका लागि यी तŒव निकै उपयोगी हुन्छन् ।
६. अण्डाः अण्डामा प्रोटिन, भिटामिन बी १२, बायटिनजस्ता तत्व पाइन्छ । यसलाई पकाउँदा थोरै तेल वा घ्यूको प्रयोग गरे झन् उपयोगी हुन्छ ।
हेयर स्टाइलको कमाल
कपाल झरे कसरी कपाल झरेको ठाउँमा कपाल रोप्ने आदि कुरा त हामीले थाहा पायौं । अब टाउकोमा कपाल भएर मात्रै पनि भएन । यसलाई सुन्दर बनाउन विभिन्न स्टाइलहरु ल्याउन सकिन्छ । हेयर स्टाइलिष्ट निल डेभिड कटुवालका अनुसार अनुहार हेरेर, उसको शरीर हेरेर, हेयर स्टाइल गर्न सुझाउँछन् । उनले भने, ‘अहिले बजारमा एकदमै धेरै चलेको पुरुष हेयर स्टाइल भनेको अन इवन कट हो । नयाँ जेनेरेसन यस कटमा आफूलाई स्मार्ट सोच्ने गरेको पनि उनले बताए । त्यस्तै लामो कपाल राख्न मन पराउनेले बेबी हेयर स्टाइल अपनाउने पनि उनले बताए ।
प्रकाशित: ३० जेष्ठ २०७५ १४:५९ बुधबार
कमालको कपाल नागरिक परिवार